को बन्दै छन् प्रहरीमा नयाँ आईजीपी ? प्रतिस्पर्धामा तीन जना| Nepal Pati
को बन्दै छन् प्रहरीमा नयाँ आईजीपी ? प्रतिस्पर्धामा तीन जना
राजधानी दैनिकका अनुसार १ फागुन २०४५ मा असईमा सेवा प्रवेश गरेका खरेल खनाल र कार्कीसँगै इन्सपेक्टर बन्न सफल भएका थिए । खनाल, खरेल र कार्कीसँगै प्रहरी निरीक्षक बनेका उत्तम कार्की पनि आईजीपी बन्न लबिङ गरिरहेका छन् । डीआईजीको वरीयतामा उत्तम कार्की चौथो नम्बरमा छन् ।
त्यस्तै, केही डीआईजीले पनि त्यसै दिन अवकाश पाउनेछन् । डीआईजीहरू भोगबहादुर थापा, गणेश केसी, केदारमानसिंह भण्डारी, रमेश भट्टराई, पुष्पचन्द्र रञ्जित, पुष्कलराज रेग्मी र सुबोध घिमिरेले पनि त्यसै दिन अवकाश पाउँदै छन् । यसअघि २९ चैत २०४४ मा सेवा प्रवेश गरेका कृष्णप्रसाद गौतम, बलराम शर्मा पौडेल, विष्णुहरि गौतमले सेवा अवधिका कारण केही दिनअघि एसएसपीबाट अवकाश पाइसकेका छन् । एक वर्षअघि सोही समूहका यादवराज खनाल र लव विष्टले पनि अवकाश पाइसकेका छन् ।